Ciidanka: Xasuus fogaatay | Doodwadaag waa Danwadaag.
Ciidanka: Xasuus fogaatay
Bal ka waran qofkii lagu soo tababaray canshuurtaada, loogu labisay in uu ilaaliyo magacaaga iyo karaamadaada uu ku dulleeyo?.Ciidanka gacantiisa ayay ku burburtay dowladdii Soomaaliya ee hore, maanta sidee buu u shaqeynayaa? Shaki weyn ayay bulshadu ka qabtaa ciidanka, kaa oo uu asaga sabab u yahay, sideebaa lagu saari karaa?
Maalin ka hor waxay aheyd maalintii Ciidanka Xoogga. Waanu bogaadineynaa ciidanka qaranka sida geesinnimada leh ee ay u difaacaan dalka iyo dadka, waxaase u baahan in si fiican loo falanqeeyo dowrka ciidanka iyo hadafkiisu, si markaa loo ogaado kaalintiisa, isna oga soo dhalaalo, waxaase ii muuqata in aanan illaa hadda la iska waraysan waxyaabaha ugu muhiimsan umadda.
Maalin aanan sii fogayn, ayaa aniga iyo nin saaxibkey ah waxaan aad u dhibsannay hab-dhaqan ka askar Soomaaliyeed, oo waddada la joojiyay, balse ku noqday caqabad socodkii nolosha. Qori fiiq iyo cabsi gelin kadib, waxaan ku iri askarigii: Raalli ahow”.
Saaxiibkeyga ila socday ayaa had iyo jeer, waxaa lagu ibtileeyay hilow uu u qabo, nadaamkii dowladahii hore. Waxa uu billaabay tirsasho, gilgilasho iyo ganuunac aan ka fahmay in ciidankan aysan edeb laheyn, oo ay u baahan yahiin dhaqan celin, waxa uuna u huwiyay ciidankii hore ammaan iyo maanuus.
Markii uu intaa yiri, ayuu arkay aniga oo candhuufta dib u liqay. Waa nin i yaqaannee, waxa uu yidhi: haye; Shaafici, see waaye? Maxaa ku haleelay?. Mise, waxaan ku jiray xasuus fogaatay, oo ka soo bilaabatay maalintii aan garaadsaday iyo dhibaatooyinka ciidanka ay u gaysan jireen bulshada rayidka markii lagu soo dhax deeyo.
Waxay aheyd 1988, B/weyne, Hiiraan. Waxaan soo xasuustay habeen bandow jiray galabteedii, waxa ay jirdil iyo hagardaamo ii geysteen, dhowr nin oo ciidamada kamid ahaa, oo bandow-ga sii billaabay saacad ka hor xilligii lagu ballamay….ujeedka, “Waa inay sugi waayeen inta gabbalka ka dhacayo, oo ay haliil u qabaan ka fara maceysiga iyo dulleynta shacabka, oo markaa dowladda jeclaa.Waxaan ahaa caruur xilligaa, waxaan gacanta ku wataa sakaal liitar caana ah oo aan reer dariska ah la iiga diray, si gabbalka inta uusan dhicin ee 6-da la gaarin aan u soo hooyo. Waa bil Ramadaan.
Luuq ayay ii galeen ama way ku sii jireen…waxaan ka war helay…Waryaa iyo qori dabadii oo dhabarka la iiga riiqay. Waddada oo jay ahayd ayaan shafka dhigtay, sidii dayaarad dageysa, sakaalkii mar hore ayaan kala lunnay isaga, aniga, caanihii iyo haruubkii.
La igama harine, waxaa i daba yaacaya dhowr kamid ah askartii oo caatannimo darteed qoriga la dirgan la’. Cagaha ayaan wax ka dayay. Waan ka soo baxsaday. Gurigii ayaan tagay. Jirkega oo dhan baa wada dardhanaya, dhiig baa iga da’aya. War illeen jid jay ah kuuma naxariisto!!!!. Waalidkii baa igu soo cararay. Maxaa ku helay? Su’aashii iyo waxaa kowsaday inay arkeen dhaawacyadii badankayga buuxiyay. Isbitaal la ima geyn karo.. La isma weydiin karo..qof loo raacanayo ma laha…Waxaa la iigu dhaqay jirkii biyo cusbo lagu daray, faataxana waa la igu tufay.
Ciidanka aan ku caqliyaystay waa kaa oo aad uga liita kan maanta jooga… Sabab?…. Waa in ciidanka aysan heyn shaqadii loo agmaday, oo aheyd in ay difaacaan xuduudda. Mar haddii la dhax keeno shacabka, oo ay qabtaan shaqadii Booliska, oo laga maarmi waayo, shaqadiisa waa tii’un. Waxaan ba marmar is dhahaa ciidanka maanta ayaa marar badan ka fiican kii hore ee aad moodday in uu asaga dadka iyo dalkaba kaligii leeyahay. Sidaa darteed, rajo weyn ayaa qabaa in ciidanka cusub uu qabsado shaqadiisa mustaqbalka dhow, kana baxo shacabka iyo xaafadaha dhexdooda.
Militari iyo Boolis waxaan ognahay in ay kala leeyahiin muhimado kala duwan, tababar kala duwan iyo diyaarin kala gaddisan. Haddii ay isku qasmaan, wareer kan unbaa lagu jirayaa. Militeriga waxaa loo tababaray in uu dilo cadowga dadka iyo dalka, wuuna ku fiican yahay markii uu haayo shaqadiisa.
Qoraa: C/raxiim Shaafici
© 2016, ↑ Doodwadaag waa Danwadaag.